I-nanofluid inguketshezi olwakhiwe oluqukethe uketshezi olusisekelo oluqukethe ama-nanoparticles. Ukuze kuhlanganiswe ama-nanofluids, inqubo ye-homogenization ne-deagglomeration esebenza kahle futhi enokwethenjelwa iyadingeka ukuqinisekisa izinga eliphakeme lokusabalalisa okufanayo. Abahlakazayo be-Ultrasonic ubuchwepheshe obuphakeme ukukhiqiza ama-nanofluids anezici ezinhle kakhulu. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kuhamba phambili ngokusebenza kahle, isivinini, ubulula, ukwethembeka nobungani bomsebenzisi.
I-nanofluid wuketshezi oluqukethe izinhlayiya ezingena-nano (≺100nm), ezivame ukubizwa ngama-nanoparticles. Ama-nanoparticles asetshenziswa kuma-nanofluids ngokuvamile enziwe ngezinsimbi, ama-oxide, ama-carbides noma ama-carbon nanotubes. Lawa ma-nanoparticles ahlakazeka abe yi-base fluid (isb., Uwoyela wamanzi, njll.) Ukuze kutholakale ukumiswa kwe-colloidal okwenziwe ngobunjiniyela, okungukuthi, i-nanofluid. AmaNanofluid akhombisa izakhiwo ezithuthukisiwe ze-thermo-ngokomzimba njengokuqhutshwa kokushisa, ukusabalalisa okushisayo, i-viscosity kanye nama-coefficients wokudlulisa ukushisa okuthe xaxa ngokuqhathaniswa nezinto ezibonakalayo zomthombo we-base.
Ukusetshenziswa okuvamile kwama-nanofluids ukusetshenziswa kwawo njenge-coolant noma i-refrigerant. Ngokwengeza izinhlayiya ze-nano kuma-coolants ajwayelekile (njengamanzi, uwoyela, i-ethylene glycol, i-polyalphaolefin njll.), Izakhiwo ezishisayo zama-coolants ajwayelekile ziyathuthukiswa.
I-homogenizer ye-ultrasonic UP400St ukukhiqizwa kwama-nanofluids
Ukwenza amaNanofluids nge-Ultrasonic Homogenizer
I-microstructure yama-nanofluids ingathonywa futhi ilawulwe ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuhle kakhulu be-homogenization kanye nemingcele yokucubungula. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kufakazelwe njengenqubo esebenza kahle kakhulu futhi ethembekile yokulungiselela i-nanofluid. Ama-Ultrasonic dispersers asetshenziswa ocwaningweni nasembonini ukuhlanganisa, ukugaya, ukusabalalisa nokuhlanganisa ama-nanoparticles ngokufana okuphezulu nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana ezincane. Inqubo yamapharamitha wokuhlanganiswa kwama-nanofluids afaka okokufaka kwamandla we-ultrasonic, i-ultrasonic amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, ne-asidi. I-Futhermore, izinhlobo kanye nokugxila kwama-reactants kanye nezithasiselo kanye nokuhleleka, lapho izithasiselo zengezwa khona kusisombululo, yizinto ezibalulekile.
Kuyaziwa kahle ukuthi izakhiwo zama-nanofluids zincike kakhulu ekwakhiweni nasekumeni kwama-nanomaterials. Ngakho-ke, ukuthola ama-microstructures alawulwayo ama-nanofluids yisici esiyinhloko esinikela ekusebenzeni nasezingeni lekhwalithi yama-nanofluids. Usebenzisa imingcele ye-ultrasonication elungiselelwe njenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa namandla okokufaka (i-Ws / mL) kuyisihluthulelo sokukhiqiza i-nanofluid ezinzile, esezingeni eliphezulu. I-Ultrasonication ingasetshenziswa ngempumelelo kuma-deagglomerate futhi usabalalise izinhlayiya kuma-nanoparticles awodwa ahlakazekile. Ngosayizi omncane wezinhlayiyana, ukunyakaza kweBrownian (isivinini seBrownian) kanye nokuhlangana kwezinhlayiyana kuyakhuphuka futhi kuholele kuma-nanofluids azinzile. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher avumela ukulawula okuqondile phezu kwazo zonke izinhlaka ezibalulekile zokucubungula, kungaqhubeka ngokuqhubekayo kuma-amplitudes aphezulu (24/7/365) futhi kuza neprothokholi yedatha ezenzekelayo yokuhlola okulula kwawo wonke ama-sonication run.
I-Ultrasonically ihlakazeke i-silika engalingani
Ukuzinza kwe-Sonication okuthuthukisiwe kwamaNanofluids
Kuma-nanofluids, ukuhlanganiswa kwama-nanoparticles akulethi kuphela ekuxazululeni nasekuvalweni kweziteshi ezincane kepha nasekunciphiseni kokuqhutshwa kokushisa kwama-nanofluids. I-Ultrasonic deagglomeration kanye nokusabalalisa kusetshenziswa kabanzi kwisayensi yezinto ezibonakalayo nakwimboni. I-Sonication inqubo efakazelwe yokulungisa ama-nano-dispersions azinzile ngokusatshalaliswa kwe-nanoparticle efanayo nokuzinza okukhulu. Ngakho-ke, ama-Hielscher ultrasonic dispersers ubuchwepheshe obuthandwayo, uma kukhulunywa ngokukhiqizwa kwama-nanofluids.
Ama-Nanofluids akhiqizwe nge-Ultrasonically kuCwaningo
Ucwaningo luphenye imiphumela ye-ultrasonication kanye nemingcele ye-ultrasonic kuzimpawu zama-nanofluids. Funda kabanzi ngokutholwe yisayensi kulungiselelo lwe-ultrasonic nanofluid.
Imiphumela ye-Ultrasonic ku-Al2O3 Ukulungiselela kwe-Nanofluid
UNoroozi et al. (2014) ithole ukuthi “ekuhlungeni kwezinhlayiyana eziphakeme, kube nokuthuthuka okukhulu kokungafani kokushisa kwama-nanofluid okuvela ku-sonication. Ngaphezu kwalokho, ukuzinza okukhulu nokwenza ngcono ukushisa okushisayo kutholakale ngokwenza ama-nanofluid asebenze nge-sonicator ephezulu yamandla ngaphambi kokulinganisa. ” Ukuqiniswa kwe-Thermal di ffusivity kwakukukhulu kuma-NP amancane. Lokhu kungenxa yokuthi izinhlayiya ezincane zinezindawo eziphakeme kakhulu ze-e-ffective surface to ratios ratios. Ngakho-ke, izinhlayiya ezincane zisize ukwakha i-nanofluid ezinzile ne-sonication ngophenyo lwe-ultrasonic kuholele ekutheni kube nomthelela omkhulu ku-ffusivity ye-thermal. (UNoroozi et al. 2014)
Isinyathelo ngesinyathelo Ukufundiswa kwe-Ultrasonic Production ye-Al2O3-water nano fluids
Okokuqala, kala isisindo sama-nanoparticles we-Al2O3 nge-elektroniki esele. Bese ufaka ama-nanoparticles e-Al2O3 emanzini anesisindo afinyeziwe kancane kancane bese uvusa ingxube yamanzi e-Al2O3. Hlanganisa ingxube ngokuqhubekayo nge-1h ngedivayisi yohlobo lwe-probe yohlobo lwe-ultrasonic UP400S (400W, 24kHz, bheka isithombe. Kwesobunxele) ukukhiqiza ukusabalalisa okufanayo kwama-nanoparticles emanzini acwecwe. Ama-nanofluids angalungiswa ngezingxenyana ezahlukahlukene (0.1%, 0.5%, no-1%). Azikho izinguquko ezisebenza nge-surfactant noma i-pH ezidingekayo. (Isfahani et al., 2013)
I-Ultrasonically Tuned Aqueous ZnO Nanofluids
U-Elcioglu et al. (2021) basho ocwaningweni lwabo lwesayensi ukuthi “i-Ultrasonication yinqubo ebalulekile yokusabalalisa okufanele ama-nanoparticles ku-base fluid nokuzinza, kanye nezakhiwo ezinhle zezicelo zomhlaba wangempela.” Basebenzise i-ultrasonicator UP200Ht ukukhiqiza ama-nanofluids ama-ZnO / amanzi. I-Sonication ibe nemiphumela ecacile ekuxabaneni komhlaba kwe-aqueous ZnO nanofluid. Okutholwe ngabaphenyi kuphumela esiphethweni sokuthi ukungezwani komhlaba, ukwakheka kwe-nano-film nezinye izici ezihlobene zanoma iyiphi i-nanofluid kungalungiswa futhi kulungiswe ngaphansi kwezimo ezifanele ze-ultrasonication.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonicators zamaNanofluids
Ukusabalalisa okuthembekile kwama-nanoparticles
Iyavumelana nohlelo lwakho lokusebenza
I-100% yomugqa iyaqhesheka kunoma yimuphi umthamo
Iphephile futhi iyasebenziseka
Ama-Ultrasonic Homogenizers Womkhiqizo weNanofluid
Imiklamo ye-Hielscher Ultrasonics, ikhiqiza futhi isakaze ama-dispersers asebenza ngokusezingeni eliphezulu kuzo zonke izinhlobo ze-homogenization kanye ne-deagglomeration applications. Uma kukhulunywa ngokukhiqizwa kwama-nanofluids, ukulawula okuqondile kwe-sonication kanye nokwelashwa okuthembekile kwe-ultrasonic kokumiswa kwe-nanoparticle kubalulekile.
Amaprosesa we-Hielscher Ultrasonics 'akunikeza ukulawula okugcwele kuwo wonke amapharamitha wokucubungula abalulekile njengokufakwa kwamandla, amandla we-ultrasonic, amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi sokugcina. Ngaleyo ndlela, ungaguqula imingcele ibe yizimo ezithuthukisiwe, okuholela lapho kuma-nanofluids asezingeni eliphakeme.
Kunoma iyiphi ivolumu / umthamo: I-Hielscher inikeza ama-ultrasonicators kanye nephothifoliyo ebanzi yezesekeli. Lokhu kuvumela ukumiswa kohlelo olufanele lwe-ultrasonic lohlelo lwakho lokusebenza namandla okukhiqiza. Kusuka ezihlokweni ezincane ezinamamililitha kuya emifudlaneni ephezulu yevolumu yezinkulungwane zamalitha ngehora, i-Hielscher inikeza isisombululo esifanele se-ultrasonic senqubo yakho.